६७ वर्षका ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटाले गरे ३० वर्षीया मोडल जसलीनसँग विवाह ? फोटो भाइरल – Wow Sansar
February 11, 2021 36
स्मरण रहोस् टिभीको सबैभन्दा वि’वादास्पद शो बिग बस सिजन १२ मा प्रतिस्पर्धी रहेका अनूप जलोटा र जसलिन मथारुको त्यतिबेला निकै चर्चा भएको थियो । यी दुई पार्टनरको रुपमा कार्यक्रममा आएका थिए र दुबैको प्रेमको कथा निकै चर्चामा आएको थियो ।
अनूप जलोटाले तीन विवाह गरेका छन् । उनकी जेठी श्रीमतीको नाम सोनाली सेठ थियो । उनी पनि व्यावसायिक रुपमा गायिका थिइन् । दुबैले सँगै थुप्रै प्रस्तुती पनि दिएका थिए । उनीहरुले अनूपको परिवारको सहमति बिना विवाह गरेका थिए । पछि उनीहरुको स’म्बन्धविच्छे’द भएको थियो ।
बिना भाटियासँग अनूपले दोस्रो विवाह गरेका थिए । तर यो सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । त्यसपछि अनूपले तेस्रो विवाह मेघा गुजरालसँग गरे । मेघा निर्देशक शेखर कपूरकी जेठी श्रीमती र पूर्व पीएम आईका गुजरालकी भाञ्जी थिइन् ।
अनूपले इजराइली मोडल रिना गोलनलाई डेट गरिसकेको पनि खबर छ । रिनाले एउटा किताब लेखेकी थिइन् ‘डियर मिस्टर बलिउड’ । यसमा उनले अनूप जलोटासँग भेटघाट र सम्बन्धबारे बयान गरेकी थिइन् ।
Prevयस्तो छ सुनै सुनले बनेको विश्व कै पहिलो होटल, कति छ एक रातको भाडा ?
Nextभाइरल भएको यी तस्विरहरुले गहिरो सन्देश दिएको छ, यसको भिडियो त उपस्थित मानिसहरुलाई रुवाएको थियो